गफ ! .....: पुस्तक गफ : अब्स्ट्रयाक्ट बैंककको कुरा
अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक ।
मैले भर्खरै अर्थात पछिल्लो पटक पढेको उपन्यास 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक' ।
कृतिहरु पढेर भूस, कनिका, बिँया निफन्दै आमाले सन्ततीको निमित्त भात पकाएर खान योग्य चामल तयार गरेझैं पुस्तक पढ्न ईच्छुक म जस्तै पाठकहरुलाई योग्य निचोड निकाल्न म नसकुँला । सही समालोचकहरुले तर कुनैपनि कृतिमाथि त्यस्तै चामल निचोड निकालिदिउन भन्ने मेरै पनि अपेक्षा हुन्छ उसो त ।
यहाँ म जे भएता पनि 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंककको' कुरा गर्न गैरहेछु । र विल्कुल 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक'को मात्र कुरा नगरेर खगेन्द्र पन्धाक लिम्बूको पनि कुरा गर्न सक्छु । यस सम्बन्धमा मेरो भन्नु तर के रहनेछ भने यो कुनै आलोचना वा समालोचना होइन । न कृतिको न कृतिकारको ।
यदि तपाईं पनि खगेन्द्र पन्धाक लिम्बूको फेसबुक साथी हुनुहुन्छ भने उनको फेसबुक स्टाटसमा तपाईंले बग्रेल्ती अब्स्ट्रयाक्ट कुराहरु पढेको हुनुपर्छ । स्टाटस मात्र हैन उनको वालमा कविताहरु र कलाकृति(पेन्टिङ्ग)हरु पनि अब्स्ट्रयाक्ट भेटिन्छन् । म उनका कविताहरु पनि पढ्न खुब रुचाउँछु तर कतिपय कविताहरु कतिपय ठाउँहरुमा बुझ्न मुश्किल भएर साँच्चै अब्स्ट्रयाक्ट लाग्छन मलाई । उनका पेन्टिङ्गहरुको त प्रसंशक नै हुँ म । पेन्टिङ्गको हकमा चैं अब्स्ट्रयाक्ट भए अझ रमाउँछु क्यार म ।
छोटा कथाका रुपमा मैले पढेका उनका आख्यानहरुले मलाई अत्यन्तै प्रभावित पारेका छन् । 'ज्योतिकथन' मैले पढेको उनको कथाहरु मध्येमा उत्कृष्ट कथा हो । 'ज्योतिकथन' जतिको उत्कृष्ट र मलाई प्रभाव पारेको कथा त मैले फेसबुकमा पाइने साहित्यमा मात्र हैन पुस्तकहरुमै पनि पढेको छैन भन्न सक्छु म । यहाँ 'ज्योतिकथन'को प्रसंग यसकारणले उठाएको हुँ कि मैले उनको फेसबुक नोटमा 'ज्योतिकथन' नपढेको भए नेपालबाट किताबहरु मगाउँदा मेरो लिष्टमा 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक' नपर्न पनि सक्थ्यो । अर्थात 'ज्योतिकथनले' नै मलाई खगेन्द्र पन्धाक लिम्बूको दर्शनमा आधारित भनिएको उपन्यास 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक' मगाएर पढ्न प्रेरित गरेको हो ।
अमूर्तबोधी दर्शनका कुराहरु लिएर फेसबुकको वालमा उनले लेख्ने कुराहरु म रुचिका साथ हेर्नेगर्छु । उनका सबैकुराहरु मलाई चित्त बुझ्ने हुन्छन् भन्ने छैन । सहमती र विमतीका कुराहरु आफ्नै ठाउँमा छँदैछन् तर यौटा छुट्टै किसिमको रोचकता भने पक्का हुन्छ उनका कुराहरुमा । मलाई लोभ्याउने अर्को कुरा उनको कलाकृति(पेन्टिङ्ग्स्) हो । कुनै पुस्तकको आवरण ईत्यादिलाई बनाईएको विषयगत पेन्टिङ्ग होस् या स्वतन्त्र रंग पोतिएका पेन्टिङ्ग्स् म सँधै मनपराउँछु उनका पेन्टिङ्ग्स् । अक्सर उनका पेन्टिङ्गमा यौन प्रतिविम्वित भएको पनि पाइन्छ । उनको कला(पेन्टिङ्ग)कर्मको मात्र कुरा उठाउँदा यो यौटा छुट्टै विषय हुनसक्छ उनका कलाकर्मको को अध्ययनको । म त्यता नगएर 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक'तिर जाउँ । 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक'मा पनि उनले यौन कर्मीकै संघर्षपूर्ण जीवन कथा रोजेका छन् ।
'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक'को कभरमा भित्रपट्टि उपन्यासका विशेषतागत कुराहरुको जानकारी स्वरुप विभिन्न कुराहरुसँगै 'पाठक स्वयं पनि पात्र एवं प्रयोगात्मक उपन्यास' लेखिएको छ । म अब्स्ट्रयाक्ट बैंककमाथि आफ्नो कुरा त्यहिंबाट गर्न चाहन्छु । त्यसको लागी उपन्यासको अन्तिम पृष्ठ २२८ हेरौं -
अँ, म एउटा पाठक, ठीक एतिबेलासम्म जीवनीमा आधारित नेपाली लेखकको प्रयोगात्मक उपन्यास 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक' मा अमूर्तबोधी दर्शनसँगै बेनामे पात्रहरुको साक्षात्कारमा मजाले हेलिएको थिएँ । मलाई पनि अर्को इमेल प्राप्त होस् झैं लागीरह्यो ।
मनैमा कामना गर्यो -
'उनको सपना पूर्ण होस् । उनको जस्तो महान आत्मज्ञान सबैले प्राप्त गर्न सकियोस् ।'
पाठक स्वयं पनि पात्र भनिए अनुशार मैले पुस्तक पढिरहँदा यहि अन्तिम पृष्ठ २२८ मा मात्र आफुलाई अलिकति पात्रको रुपमा लिनसक्ने ठाउँ भेटाएको थिएँ । तर त्यो पनि ठाउँको ठाउँ चित खायो जब 'मनैमा कामना गर्यो -' लेखिएको पढें ।
'....मलाई पनि अर्को इमेल प्राप्त होस् झैं लागिरह्यो.....' लेखिएपछि त्यस मुन्तिर म(पाठक पात्र)लाई आफैं कामना गर्न नदिएर हस्तक्षेप गर्दै लेखकले उल्लेख गरेका छन् मेरो(पाठक पात्रको) कामना । पाठकलाई पात्र बनाइटोपलेको मात्र प्रतीत हुन्छ यहाँ । नत्रभने 'मनैमा कामना गरें -' लेखिदिएर पाठकले स्वयं कामना गरेको जस्तो अनुभुत हुन दिनुपर्थ्यो पाठकलाई ।
यदि यो 'मनैमा कामना गरें -' हुनुपर्नेमा मुद्रण त्रुटीको कारण 'मनैमा कामना गर्यो -' भएको हो भने, कभरमै पाठक स्वयं पनि पात्र भनेर महत्वसाथ लिइएको ठाउँमै गल्ति भएपछि भाषागत कुरामा पाठक निराश होलान् ।
अँ, भाषाकै कुरागर्दा, लेखकले यस उपन्यासलाई भाषा विद्रोहको रुपमा लिएको पनि बुझेको छु मैले । तर मैले भाषा विद्रोह छ भन्नुपर्ने कुरा पनि खास केहि देखिंन उपन्यासमा ।
हो, धेरै ठाउँमा आफन्तहरु भन्नलाई 'अरआफन्त' भनिएको छ । यो मेरो लागी नौलो हो । कहिँ कसैले लेखेको देखेको थिएन मैले तर 'सरसामान', 'नरनाता' जस्ता शब्दहरु पढिरहेको हुँदा 'अरआफन्त' सहज नै लाग्यो ।
त्यस्तै पृष्ठ ९९ मा एउटा उखान प्रयोग गरिएको छ - 'धान काट्ने मुसो कुटाइ खाने विरालो ।' बैंककका सडकहरुमा अबैधानिक तवरले यौनकर्म गर्ने विदेशी मूलका यौनकर्मीहरुलाई प्रहरीले छापा मारेर समातेको र बैधानिक मानिएका स्थानिय यौनकर्मीहरुले समातिएकाहरु प्रति टिप्पणी गरिएको प्रसंगको सम्बादमा आएको छ उखान । यो उखान थाई जनजीवनमा प्रयोग हुने र त्यता 'कुटाइ खाने विरालो' नै भनिने हो भने ठीक छ । होइन, नेपाली जनजीवनमा चले अनुशार यो उखान लिइएको हो भने नेपालीमा 'धान खाने मुसा चोट पाउने भ्यागुता' भनेर प्रचलित छ । उखानको प्रयोग गर्दा प्रचलनमा रहेकोलाई फेरबदल गर्नुको तुक देख्दिंन म । अथवा भ्यागुतालाई विरालो बनाउँदा उखान प्रचलनको भन्दा के कति कारणले अझ सान्दर्भिक भयो वा सटिक बन्यो त्यो पनि बुझिंन मैले । भाषा विद्रोहको रुपमा यस्तै कुरालाई लिइएको हो भने म त यस्लाई भाषा विद्रोह हैन भाषामा नासमझ भन्छु । तर यहि र यस्तै कुरा त भाषा विद्रोह पक्कै होइन होला ।
उपन्यासको दह्रो पक्ष भनेको जुनसुकै वा जेसुकै होस् पेशागत कर्म प्रतिको सम्मान हो । उपन्यासले यौनकर्मलाई पेशा बनाएर हिंड्नेहरुले पनि समाजमा असल काम गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण पेश गरेको छ । नेपाल लगायत एसियामै यौन कर्मलाई जसरी हेरिन्छ त्यो दोषपूर्ण छ र त्यसलाई फरक दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ भन्ने कुराको पैरवी गरेको छ उपन्यासले । यसलाई मैले उपन्यासको राम्रो पक्षको रुपमा लिएँ तर व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा यो पैरवी केवल पैरवी मात्र रहने कुरा उपन्यासले नै प्रस्ट्याउँछ । जतिसुकै आत्मज्ञान प्राप्त गरेपनि, जतिसुकै स्वबोध भएपनि यौनकर्मलाई पेशा बनाएर हिँडेपछि विश्वका जुनसुनै समाजका मान्छेहरुले पनि केवल दयाको भिखमात्र दिँदा रहेछन्; जीवनमा अपनाएर बराबरीको हैसियत दिँदैन रहेछन् भन्ने कुरा उपन्यासकि मुख्य बेनामे पात्रले पटक पटक धोखा पाउनुले बताउँछ ।
उपन्यासमा मुख्य मैले पढ्न चाहेको र बुझ्न चाहेको अमूर्तबोधी दर्शनको कुरा थियो । उपन्यासमा अमूर्तबोधी दर्शनसँग सम्बन्धित भनिएर जे जति कुराहरु लेखिएका छन् ती सबै कुराहरु कुराका ठाउँमा ठीक छन् तर उपन्यासकि बेनामे मुख्य पात्र जो अमूर्तबोधमा स्वसत्त्व प्राप्त गरेर दर्शनका बुँदागत कुराहरु मन्तव्य(पृष्ठ २१०)मा राख्छिन् । तिनै पात्र पटक पटक आफ्नै स्वसत्त्व प्राप्त गर्दै, पुन हराउँदै गरेझैं विभिन्न मोडहरुमा धोका, छलछाम र झमेलामा फसिरहन्छिन् । उपन्यासको अन्त्यसम्ममा पनि उनलाई स्वसत्त्वबोधताले ध्येयमा सफल तुल्याउँदैन ।
अमूर्तबोधी दर्शनका कुराहरु जान्न आतुर मलाई यो कुरा नमज्जा लाग्यो ।
यौनकर्म गर्न ईच्छित हुन्नन् उपन्यासकि मुख्य बेनामे पात्र तर उनको सामुन्ने एकातिर विकल्पहरु नै नभए जस्तै त्यहि कर्मलाई पेशाको रुपमा अँगाल्न फर्किनुपर्ने बाध्यताहरु खडा भइरहन्छन् भने अर्कातिर दर्शनका ठुला ठुला कुराहरु उनै पात्रले उपन्यासको शुरुदेखिनै गर्दै जान्छिन् । अमूर्तबोधी दर्शनका कुराहरु गर्नलाई उपन्यासकि मुख्य बेनामे पात्र कि त अयोग्य पात्र हुन् कि त अमूर्तबोधी दर्शन नै उपन्यासमा अव्यावहारिक देखिएको हो । संगतीमा कहिं केहि अपुग जस्तो भैरह्यो मलाई दर्शनको सवालमा यो उपन्यास । उपन्यासमा पात्रगत कथावस्तु र दर्शनका कुराहरुलाई अलग्गै अलग्गै अनुभूत गर्दै पढें मैले भने पनि हुन्छ । दर्शनको हिसाबमा सफल प्रयोगात्मकको शट्टा एकोहोरो उपदेशमुखि जस्तो भएको छ उपन्यास ।
कथानक रसिलो छ उपन्यासको । पठनमा पट्यार लाग्दैन बरु हरेक घट्नाक्रम यस्तरी द्रुतताका साथ अघि बढ्छन् कि पाठकहरुलाई यौटा घट्नाक्रमबाट अर्कोमा पुग्दा अघिल्लो घट्नाक्रमको स्मृति दुरुस्तै राख्न मुश्किल हुन्छ । केहि पटक अघिल्लो घट्नाक्रम ताजा गराउनलाई मैले पनि रिभर्समा गएर पढें केहि ठाउँमा । मुख्य पात्रको तर्फबाट अति धेरै वर्णनात्मक भएको छ कथानक । अझै पनि दोश्रो अध्यायमा भएको कुरा उपन्यासकि मुख्य बेनामे पात्रको जीवनको कुन खण्डमा भएको हो वा अर्कै पात्रको कुरा हो द्विविधा जस्तै नै छ । दोहोर्याएर पढेपछि पनि घट्नाक्रमको तादात्म्य नमिलेपछि लाग्यो कदाचित् म स्वयं पो योग्य पाठक हैन कि?
अन्त्यमा, यदि कसैमा 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक' पढ्न लायक उपन्यास हो कि होइन त?' भन्ने प्रश्न गुजुल्टिरहेको छ भने मेरो भन्नु यहि हुनेछ कि एकपल्ट पढेर नै हेर्नुहोस् । मैले उपन्यासको बथख्वाँईं गरेजत्तिकै गरेर लेखें होला माथि तर त्यसो होइन । उपन्यासका हरेक पृष्ठमा जीवन उपयोगी कुराहरु भेटिन्छन् 'अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक'भित्र । फेरि व्याक्ति व्याक्तिको ग्रहण क्षमता फरक पनि त हुन्छ यसर्थ आफैं नपढि अब्स्ट्रयाक्ट बैंकक कस्तो भनेर तपाईं कसरी थाहा पाउनु होला?
(ब्लगकै सामाग्री स्वरुप लेखेको यो पुस्तक गफलाई मैले फेसबुक नोटमा पनि सेयर गरेको छु ।)
Posted by दीपक जडित at 7:41 AM